Olee otú Hichapụ Songs on iOS 6 na a Time
> Resource> iOS> Olee otú iji Hichapụ Songs on iOS 6 ozugbo
Mgbe na ihe iPhone, iPad ma ọ bụ iPod, ị ga-chọrọ mbubata songs na ya, nke mere na ị na-enwe ike ịnụ ụtọ ha n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Syncing music gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod dị mfe. Ma, ọ bụrụ na i bu n'obi ka ihichapụ music si iOS ngwaọrụ, ị ga-esi n'ime nsogbu. Apple nanị na-ahapụ gị ihichapụ otu song na oge. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ị nwere 1,000 iberibe music, ị nwere ka ihichapụ ha na otu edinam maka 1,000 ugboro. N'ezie, ị nwere ike ihichapụ a dum playlist. Na akpachapụghị anya, ị nwekwara ike ihichapụ ọkacha mmasị gị songs na playlist.
Ka a okwu nke eziokwu, e nwere otu ụzọ dị mfe na i nwere ike ọ bụghị naanị hichapụ gị achọghị songs ozugbo, ma na-ọkacha mmasị gị music. Ịmụta otú a, ị kwesịrị ibudata ihe iTunes enyi akpan mere maka iPhone, iPod na iPad - Wonderdshare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Dị ka a keukwu iOS njikwa, ọ na-enye gị ka ihichapụ songs si iOS 9/8/7/6 ọsọ ọsọ na mfe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ọtụtụ achọghị listi ọkpụkpọ, ọ na-enyere gị iji wepụ ha ngwa ngwa dị ka mma.
Ma nsụgharị na-arụ ọrụ ọma iji wepụ songs na gị iPhone, iPad na iPod. Ebe a, anyị na-Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) dị ka ihe atụ. Wonershare TunesGo (Mac)-arụ ọrụ na yiri nke ahụ.
Mfe nzọụkwụ ka ihichapụ songs on iOS 9/8
Download na wụnye a bara uru iTunes Companion maka iPhone, iPod na iPod gị na kọmputa. Mgbe ahụ, na-eso akụkụ n'okpuru na-aga site nzọụkwụ ..
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iOS ngwaọrụ ka na kọmputa mgbe wụnye njikwa
Ka malitere, malite TunesGo na kọmputa gị site abụọ-ịpị Wondershare TunesGo.exe faịlụ. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na kọmputa. Mgbe niile data na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ga-egosipụta na-ekpe na-n'akụkụ kọlụm nke bụ isi window.
Cheta na: Ọ dị mkpa na ọ dị mkpa ka ị na-ibudata ma wụnye iTunes na kọmputa gị tupu wepụ music si iPhone, iPad ma ọ bụ iPod.
Nzọụkwụ 2. Hichapụ music on iOS 6
Ugbu a, ka ihichapụ music, ị kwesịrị ị pịa "Media" taabụ iji bugote media window. Pịa "Music", akpa button na n'elu akara. Na music management window, họrọ songs na ị chọrọ ka ihichapụ, wee pịa "Hichapụ". Jide n'aka gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na jikọọ kọmputa gị oge niile.
Cheta na: TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iOS ngwaọrụ ụdị, dị ka iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4S, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, iPod aka 5 na iPod aka 4. Pịa Tech Spec iji nweta ihe Ama.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ listi ọkpụkpọ, pịa "Playlist". Na playlist window, họrọ listi ọkpụkpọ na ị chọrọ ka ihichapụ na pịa "Hichapụ".
Ị mere nke ọma! I wepụrụ music si iOS ngwaọrụ onwe elu ohere. E wezụga ihichapụ music, ị nwekwara ike ihichapụ multiple foto gị iOS, ihichapu ọtụtụ ihe nkiri, na-ewepụ kọntaktị na ya.
The video on ihichapụ songs on iOS 9/8
Top 5 ịtụnanya mma isi nke ika-ọhụrụ apple music ọkpụkpọ